Fitaovam-pitiliana sy maska Ho tonga androany alarobia ny "cargot"
Te hitoe-jaza : mila mampihena vatana ve?
Isan’ireo fanomanana tokony hatao amin’ny vatana, mialohan’ny hametrahana zaza,
Atody : Mampiakatra hery fiarovana voajanahary !
Mitondra otrikaina maro ho an’ny vatana ny fihinanana atody, amin’ny tahany antonony. Kely mantsy ny kalôria entiny fa betsaka kosa ny prôteina, kalsiôma, vitamina, ary fera ao anatiny. Santionany amin’ireo vokatsoa entiny ireto atoro anao ireto.
Vehivavy salama : Harindrao ny sakafo!
Mba handaminana ny toe-pahasalaman’ny vehivavy, dia ilaina ny mandritra ny sakafo hanina. Satria zava-dehibe ny fahasalamana,
"Biberon" : Tsy maintsy rano mafana ve?
Satria mila fitandremana manokana ny zazakely, noho izy mbola tena marefo, dia aleo tsy hatao kinangananga ny rano hampiasaina hanaovana ny “biberon”-any. Hoy ny dokotera.
Tsikobokobon-danitra : Anana mahasolo fanafody
Karazana anana maniry eny ho eny ny tsikobokobon-danitra na tsiboraky, fiantso azy any Atsimo, na “pourprier”
Ady amin’ny tazomoka Hisy paikady vaovao handrindràna ny fizaràna lay
Aretina faha-efatra miteraka fahafatesana betsaka eto amintsika ny tazomoka. Manoloana izany indrindra dia misy ny atrikasa izay tanterahina ao Antsirabe renivohi-paritr'i Vakinankaratra nanomboka omaly alatsinainy 16 novambra 2020.
voalohany Maska an-tapitrisany no fantatra fa ho tonga eto Madagasikara amin'ity herinandro ity raha ny nambaran’ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny laha-dresaka izay nataony ny alin’ny alatsinany teo.
Ho zaraina manokana ho an’ireo mpitsabo, ho an’ireo marary, ho an’ny mpitandron’ny filaminana,... izy ireo. Androany no fantatra fa higadona eto amintsika ny "cargot" voalohany izay hitondra ny ampahany amin' ireo fitaovana entina hiatrehana sy hiarovana ity valan’aretina ity. Tafiditra ao anatin’izany ny maska sy ny « test rapide » izay ahafahana mahafantatra ny valin’ny fitiliana ao anatin’ny 20 minitra monja. Marihina fa ny firenena mikambana sy I Chine no hamatsy ireto fanampiana ireto. Lalaina Rav